कानुन व्यवसायीले भने : ‘विधिको शासन मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘नेपालमा सरकारबाट नै मानवअधिकार र संविधानको रक्षा भएन’
२५ मंंसिर,बुटवल । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्किदै गएकोमा कानुन ब्यबसायीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकारको सन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्रभएपनि ब्यबहारिक रुपमा भने चुकेको उनीहरुको ठहर छ ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्ने कानुन ब्यबसायीले नेपालमा पछिल्लो समयमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको भन्दै हरेक मानिसको अधिकार संरक्षणका लागि राज्यको भूमिका गहन र जिम्मेबारपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपालमा गैर न्यायीक हत्या हुने गरेको भन्दै संयुत्त राष्ट्रसंघले यसलाइ गम्भिरताका साथमा हेर्ने गरेको समेत बताए । नेपाल बार एशोशिएसन केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुनैपनि अबस्थामा मानव अधिकार हननका घटनामा आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । उनले लोकतन्त्र कुण्ठित हुदा बार एशोशिएसन लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने दाबि गरे ।
श्रेष्ठले भने-‘कसैको पनि अधिकार खोसिएको हामीलाइ मान्य हुदैन,जनताको घरघरमा न्याय,लोकतन्त्रको अनुभुति दिलाउन राज्य जिम्मेबार हुनुपर्छ,राज्यमा कुनैपनि तानशाहले लोकतन्त्र र न्यायको बिरुद्धमा कुनै कदम चाल्नुउसैका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’
‘तीन तहका सरकार मुलुकमा भएपनि न त कानुन बनाए , न त प्रदेशले केन्द्र र राजधानी नै तोक्न सके ,कानुनको उल्लंघन भयो ।’ उनले भने ।
बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकार गलत बाटोबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘गैर न्यायीक हत्या बढे,शासकहरुले निरंकुशताको प्रयास गरिरहेका छन् ,यी संबिधान बिपरितका काम हुन् । ’केसीले नेपाललाइ कसैले पनि बन्धक बनाउन नपाउने भन्दै भने-‘हिजो राजाले गरेका गलत अभ्यासका कारण आज हिजोका राजा कहा हराए खोज्नुपर्ने भएको छ ,आज पनि ‘निर्वाचित महाराजा’हरुले यस्तै प्रेस,वाक स्वतन्त्रताको बिरुद्ध लागेका छन् ,उनीरुको पनि यस्तै हातल हुन सक्छ ।’
नेपाल बार एशोसिएसन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक सुनिल पोखरेलले मुलुकमा विधिको शासन अल्पमतमा परेको गुनासो गरे । उनले कानुनको बर्खिलाप गभैरहेको बताए । ‘गैर न्यायीक हत्या बढेका छन्,मानवअधिकार उल्लंघन ब्याप्त छ,प्रेसलाइ हस्तक्षेप गरिएको छ,सरकारले नै प्रोपोगान्डा गरिरहेको छ ।’
डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)का केन्द्रिय अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले सरकारबाट नै मानव अधिकार हनन्का घटना भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले नागरिकलाइ विधिको शासन,शान्ति सुरक्षा,गास,बास कपास, लगायतका आधारभूत कुरामा नै बिभेद गरिएको बताए । उनले कानुनी राज्य स्थापनाका लागि सबैले आ-आफ्नो सहि भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने बताए । साक्षात्कार कार्यक्रम रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा कपिल ज्ञवालीको संचालनमा भएको थियो ।
राप्रपाको एकीकरण सम्झौता हो : कमल थापा
काठमाडौं, ५ असोज । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाको एकीकरण सम्झौता भएको बताउँदै एकताको जगमा
संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्दै वामदेव, मन्त्री बन्लान त ?
काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव
बिएण्डसीमा कार्यरत एक डाक्टरसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मीले जिते कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, ५ असोज । झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पतालमा कार्यरत एकजना चिकित्सक र ११ स्वास्थ्यकर्मी गरी
ओली–दाहाल भेटवार्ता, मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनबारे छलफल
काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली
सांसद विडारीलाई बाबुरामले निर्लज्ज व्यक्तिको संज्ञा दिएपछि..
काठमाडौं, ५ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम
आज बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित्
काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युयनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आज अपरान्ह १ बजे
महालेखामा कमसल सफ्टवेयर खरिदमा मुछिएका भुर्तेललाई पदक
काठमाडौं, ५ असोज । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कमिसनको चक्करमा लागेर कमसन सफ्टवेयर खरिद गर्ने भूमिका